जसले हज्जारौ संक्र`मित बचाए, मृ`त सयौँको संस्कार गरे, आफ्नो मृ`त्यु पछि ला`श उठाउने कोही भएन ! - Nepali in Australia
October 16, 2020 autherLeaveaComment on जसले हज्जारौ संक्र`मित बचाए, मृ`त सयौँको संस्कार गरे, आफ्नो मृ`त्यु पछि ला`श उठाउने कोही भएन !
काठमाडौ । मानवता रित्तिएका विभिन्न घ`टना त बाहिर आएका नै हुन् । तर यतिहदसम्म होला भनेर चै कोही पनि विश्वास गर्न सकिन्न । कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को महामा`री दौरानमा पछिल्लो ७ महिनादेखि आफ्नो जीवन नै जो`खिममा राखेर अरु मानिसको सहयोगमा एक व्यक्ति जुट्छन् । भारतको दिल्‍ली स्थित सील`मपुर इलाकामा काम गरिरहेका दर्जनौ एम्बुलेन्स ड्राइभरले एकसाथ जागिर छोडे ।
बाँचिएछ भने अरु काम गरौँला । एम्बुलेन्स चलाउँदिन भन्दै सबैले जागिर छोडेपछि अस्पताल देखि संघ–संस्थाका नाममा रहेका एम्बुलेन्स समेत थन्किए । त्यही बेला हज्जारौँ कोरोना संक्र`मित बिरामी हुन थाले । यो इलाकामा हाहाकार भयो । हजार भन्दा बढी मानिस त यहाँ नै मृ`त्यु भयो । यस्तो घडीमा साथ दिन आरिफ खानले हिम्मत गरे । उनले दिनमा नै सयौँ संक्रमि`तलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याए ।
आफन्त, इष्टमित्र, बाबु, आमा, छोरा छोरी समेत टाढा भएकालाई साथ सहयोग गरे । अझ भाइरसबाट मृत्यु भएपछि आफन्त, इष्टमित्र, बाबु, आमा, छोरा छोरीले हेर्न समेत आउन नमिलिरहेको बेला आफै ट्रलीबाट लाश एम्बुलेन्समा चढाए । आफै संस्कार गर्ने ठाउँसम्म पुर्याए । त्यहाँ डोजरले ठाउँ बनाउँथ्यो ।
आरिफ आफैले अन्तिम संस्कार गर्थे । अन्तिम संस्कारको समयमा उनी लाशलाई सल्यूट गर्दथे । त्यो तस्विर बाहिर आउँन थालेपछि भारतभरी कोरोना भाइरसबाट बिदा भएकालाई अन्तिम विदाईमा सल्यूट गर्न थालियो । त्यो सिको नेपालमापनि गरिएको छ ।
ट्रक ड्राइभर सँग अफ`येर : १८ वर्षकी सरिताको बिचल्ली.. ग`र्भ`वती बनाएर भा`गेपछि…